Soo-saareyaasha Ku-habboonaanta Korontada, Alaab-qeybiyeyaasha - Warshada Ku-habboonaanta Korontada ee Shiinaha
Faahfaahin degdeg ah >>> Dalka asalka ah ee hebei china Model OEM (la beddeli karo) Magaca Alaabta NxL xajinta xiisadda Waddanka asal ahaan Shiinaha Qalabka Sayniska ee aluminium Isticmaal qalabka korontada ku rakibida qalabka korontada>>> 1) Xiriirka qalabka dahabka. Qalabka noocaan ah waxaa loo isticmaalaa isku xirka baska adag, baska jilicsan iyo meesha laga baxo ee qalabka korantada, isku xirka fiilada T ee fiilada iyo isku xirka fiilada isbarbar socda oo aan xoog lahayn, iwm.
Horudhac Alaabta >>> NY nooca Haydarooliga isku xidhka xajinta xadhkaha dhulka waxa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo laguna xidho kirishbooyada xadhigga daahiyaha xiisada ama qalabyada ku yaala tiirka & munaaradda iyada oo loo marayo ilaalinta awooda xajinta ee uu dhaliyo kirishbooyada. Waxay ka kooban tahay aluminium iyo walxo bir ah oo aad u sarreeya, oo leh dusha nadiif ah & muddada isticmaalka joogtada ah; Dhanka kale way fududahay in la rakibo, oo bilaash ah luminta hysteresis, kaarboon yar & badbaadinta tamarta. Awood koronto oo ku habboon...
Faahfaahin deg-deg ah >>> Habaynta haa texture ee walxo aan birta lahayn Isticmaal sheyga xajin lagu dabaqi karo shaqada xajinta dahaadhka Galvanized dahaarka daboolka adeega la talinta heerka Voltage heerka laba boqol iyo labaatan Tilmaanta Alaabta >>> Xakamaynta xiisadda waa nooc ka mid ah qalabka qallafsan ee loo isticmaalo dhamaystirka isku xirka kirishbooyada ee kirishbooyada ama fiilada, waxayna siisaa taageero makaanikada dahaarka iyo kirishbooyada. Caadi ahaan waa anaga...
loox sudhay ZBD oo tayo sare leh loox laadlaad ah
Faahfaahin Degdeg ah >>> Meesha Asal ahaan Hebei, Shiinaha, Hebei, Shiinaha (Dhul-weynaha) Nambarka Moodelka UB, Z ZS ZBD Isticmaalka Khadka Korontada Dhismaha Walaxda Aanay Lahayn, Dip Galvanized Steel Structure Socket Indhaha Midabka Qalinka Codsiga Korantada Korantada Dhismaha Dusha Toosan Shahaadada dusha sare ee ISO9001 Kala-saarista qalabka korantada ee korantada >>> Marka loo eego sifooyinka ugu muhiimsan iyo isticmaalka qalabka dahabka, waxaa loo qaybin karaa qiyaas ahaan fo ...
Isku xirka saxanka L-nooca T-nooca iskutallaabta iskutallaabta gabal xidhitaanka
Faahfaahin Degdeg ah >>> Birta Galvanized Hot-Dip, birta galvanized-kuleelka ah Dhammee nooca isku xidhka ku habboon ee meesha asalka ah ee Shiinaha Model Number L, saxan shaqada harqood isku xidhka xidhidhiyaha xidhidhiyaha xidhidhiyaha xidhidhiyaha jilaha shaqada culus saxanku waa xubin dhismeed oo kala saarta laba ama in ka badan oo xubno dhismeed ah oo isku xidha guud ahaan. Habka iyo qaab-dhismeedkiisu aad buu u badan yahay, gudaha...